Abuuritaanno cusub, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Seeds, basasha, ukunta, siisay. Waxyaalahani waxay kiciyaan male-awaal badan, miyaanay ahayn? Markii aan gubay nalalka gugan, wax yar baan shakiyey. Sidee bay foolxumadan, bunni, nalalka waaweyn u soo saari karaan ubaxyada quruxda badan ee ku qoran sumadda xirmada?
Hagaag, wakhti yar, biyo yar iyo qorrax yar, shakikeygu wuxuu isu beddelay cabsi sida jeermiga cagaaran marka hore dhulka uga soo baxo. Kadib burooyinkoodii ayaa muuqday. Ka dib kuwan casaan iyo cadcad, 15 cm ubax ayaa la furay. Markaa xayeysiis been ah! Waa mucjiso!
Mar labaad ruuxiga ayaa ka muuqda jidhka. Aan hareeraha eegno. Aynu eegno muraayadda. Sidee bay kuwaan maskaxiyan ah, isjecel, faan badan, hunguri badan, sanamyo u adeegayaan (iwm.) Dadku miyey noqdaan kuwo quduus ah oo qumman, sida lagu saadaaliyay 1 Butros 1,15:5,48 iyo Matayo? Tan waxaa ku jira mala-awaal badan, nasiib wanaag innaga, Ilaahay ayaa inbadan leh.
Waxaan la mid nahay basashaas ama miraha dhulka ku jira. Waxay u muuqdeen kuwo dhintay. Ma muuqan wax nolol ah oo iyaga ku dhex jira. Ka hor intaanan noqon Masiixiyiin, waxaan ku dhintay dembiyadeenna. Noloshu maanaan haysan. Ka dibna wax mucjiso ah ayaa dhacay. Markii aan bilaabay inaan rumeysanno Ciise, waxaan noqonay abuurlo cusub. Isla xooggii uu Masiixu ka sara kiciyey kuwii dhintay isagaa inaga sara kiciyey kuwii dhintay.
Waxaa naloo siiyay nolosha cusub, sida ku xusan 2 Korintos 5,17: “Markaa haddii qof Masiixu leeyahay, isagu waa abuur cusub. Wixii uu hore u ahaan jiray wuu dhammaaday; wax cusub (nolol cusub) ayaa bilaabatay! " (Rev. GN-1997)
Maqaalkeyga ku saabsan aqoonsigeenna Masiixa, waxaan dhigay "la doortay" cagta iskutallaabta. "Abuur cusub" hadda wuxuu ku socdaa jirridda toosan. Ilaah wuxuu inaga doonayaa inaan ka mid noqono qoyskiisa; taasina waa sababta uu inoogu abuuro abuur cusub abuurista xoogga Ruuxa Quduuska ah.
Sidii nalalkaas oo kale uma eka sidii aan hore u beeray, sidaas oo ay tahayna rumaystayaasha uma eka in aan u egnahay sidii aan ahaan jirnay. Waan cusub nahay. Mar dambe uma fakirno sidii aan horey u maleyn jirnay, uma sii dhaqmaynayno oo aan ula dhaqmeyno dadka kale sidii aan ahaan jirnay. Kala duwanaansho kale oo aad muhiim u ah: mar dambe kama fikirno Masiixa sidii aan isaga ugu fikirnay isaga. Rev. GN-1997 wuxuu soo xiganayaa 2 Korintos 5,16 sida soo socota: “Sidaas darteed hadda kadib anigu mar dambe uma xukumi doono sida [sifo ahaan] heerarka aadanaha [qiyamka dunida], xitaa kan Masiixa, oo aan mar uun sidan u xukumay [Maanta waan aqaanaa isaga aad ayuu uga duwan yahay kii hore]. "
Waxaa nala siiyay aragti cusub oo ku saabsan Ciise. Mar dambe kama aragno muuqaal adduun, muuqaal cajiib ah. Kaliya ma uusan ahayn macallin weyn. Kaliya ma ahayn qof wanaagsan oo si sax ah u noolaa. Isagu si dhakhso ah uma uusan qorin qori adduunka ..
Isagu waa Sayid iyo Bixiyaha, oo ah wiilka Ilaaha nool. Isagu waa kii inoo dhintay. Isagu waa kan naftiisa na siiyay inuu na siiyo noloshiisa. Isagu wuxuu naga dhigay mid cusub.